Manazava ny dian'ireo Eveka nivahiny ad limina tany Vatikana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nangonin'i Myriam il y a 5 années
(Lahatsoratra nalaina tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3864, alahady 20 apirily 2014).
Tafa sy dinika nifanaovan'ny irakin'ny Gazety Lakroan'i Madagasikara tamin'i Mgr Fulgence Rabemahafaly.
- Azo hazavaina tsotsotra ve Monsenera, ny hevitry ny teny hoe Visite Ad limina ?
Miarahaba an-kafaliana antsika mianakavy miara-mankalaza ny fetin’ny Paka, amin’izao taona 2014 izao. Fotoana lehibe indrindra amin’ny fiainantsika kristianina izao: hitodihana lalindalina kokoa amin’ny fototra inoana, dia i Jesoa Kristy nitsangan-ko velona. Tsy mifanalavitra amin’izany ny dianay, namangy ny Renivohitry ny Eglizy Masina Renintsika, toy ny fanao isaky ny dimy taona eo ho eo, ary isaoranay anareo rehetra nitondra am-bavaka. Antsoina hoe “Visite ad Limina Apostolorum”, izay azo adika tsotra hoe, mamangy ny fasan’ireo apositoly, indrindra i Md Piera sy M. Paoly. Izany dia fivahinianana masina, anamafisana indray ny fitohizan’ny asa ankinina amin’ny apositoly sy ny dimbiny. Ny Papa Ray Masina no dimbin’i Md Piera, ary ny eveka no dimbin’ny apositoly; ka ny famangiana toy izao dia mampitodika ny fo amam-panahy amin’ny fifandimbiasam-piainana anohizana ny asam-pamonjena natombok’i Kristy. Izany no anisan’ny anamarihana fa isaky ny misy eveka vaovao dia eo ambony fasan’ireo zoky apositoly ireo no ataon’ny Papa sonia ny taratasy fanendrena azy, vakina aseho vahoaka iny. Araka izany dia famangiana sy fifampidinihana amin’ny Papa Ray Masina sy ireo sampandraharaha maro ampandehanana ny fitantanana ny fiainan’ny Eglizy manerana ny tany koa ny fivahinianana masina nataonay.
- Inona no tena nampiavaka azy ?
Ny nampiavaka azy tamin’ity taona 2014 ity, izay efa tara satria tamin’ny taona 2005 no nisy fivahinianana miaraka farany, dia niara-nonina tao amin’ny trano Mb Marta onenan’ny Papa mihitsy izahay, ny 26 marsa ka hatramin’ny 30 marsa. Mifankahita isan’andro ao amin’ny efitrano fisakafoana, ary mifanena eny an-dalantsara aza. Niara-nanolotra sorona masina taminy izahay ny 29 marsa. Rahefa nihaona taminy indray dia tsy nidinika vetivety 10 minitra toy ny teo aloha, fa indray noraisiny ny ekipa voalohany, eveka 11 mirahalahy, ka nifampizara ny fiainan’ny diosezy tsirairay, ary nifampizara ny fiainam-piangonana ankapobeny aty Madagasikara. Voateny araka izany koa ny fiainam-pirenena; ny lafiny manahirana sy ny mitondra fanantenana ary ny atrikasa akaiky. Naharitra ora iray sy sasany ny fihaonana.
- Manao ahoana ny fahitanao ny Papa Fransoa izay malaza ho mahasarika olona maro amin’ny fihetsiny sy fahazarany ao Vatikana ?
Ny fahitako ny Papa Fransoa dia Raiamandreny manana ny toetrany manokana sy voavolavolan’ny tantaram-piainany tany an-tanindrazany ary tato anivon’ny Fiangonana. Tiany ny antson’Andriamanitra miatefa aminy, ka valiany an-kafaliana sy am-pahatsorana ary ny ainy manontolo no atolony amin’izany. Zava-misy andavanandro no resahiny sy dinihina, ary andraisana sori-dalana. Mahasarika olona maro ny Papa; fa misy ihany moa ireo tsy maintsy manohitra na iza na iza no eo. Amin’ny ankapobeny dia iainany ny maha evekan’i Roma azy. Mamangy paroasy isan’alahady izy, ary mitsidika ankohonam-piainana amin’ny herinandro, ankoatry ny fandraisana sokajin’olona maro. Tena Ray mpitantana ny Eglizy izy, ary mifantoka manokana amin’ny famonjena ny sahirana ny fony. Maha te hihaino ny firesahany an’i Kristy sy ny tokony ho toe-piainantsika.
- Inona no tena nivoitra tamin’ny hafatra nomeny ho an’ny fivondronamben’ny Eveka, ho an’ny vahoaka, ho an’ny Firenena Malagasy ary ho an’ny mpitondra ?
Ny hafatra nomeny ho an’ny fivondronamben’ny eveka eto Madagasikara dia isaorana ny Gazety Lakroa, fa iny efa nivoaka tamin’ny alahady 6 avrily iny. Tsiahiviny ireo adidin’ny eveka, na eo amin’ny fampianaram-pinoana sy fijorona amin’izany, na eo amin’ny fitiavana ny fiaraha-miasa ary ny fahaizana mampahalala an’i Kristy. Tsy miasa irery fa efa fiainana hatramin’ny Konsily farany ny toko telo mahamasa-nahandro, dia ny pretra sy relijiozy ary lahika. Tsy maintsy ho mpiaro ny hasin’ny fianakaviana isika, ary hiatrika akaiky ny fampitam-pinoana sy ny fivelomana izany.
Ny vahoaka Malagasy dia miaina soatoavina maro, ary manome hasina ny fianakaviana; halalinina sy entina mikatroka hatrany izany. Ny mpitondra tsy tokony ho variana amin’ny tenany fa hanompo vahoaka sy hanasoa firenena.
-Ahoana ny fomba fitoriana ny Vaovao Mahafaly ankehitriny sy ny laharam-pahamehana ?
Efa ela no nitoriana ny Vaovao Mahafaly, fa tsy maintsy mitohy amin’ny famantaram-pamonjena izany. Inona no famantarana manokana ho antsika Malagasy fa efa nandray ny finoana, eo anivon’ny Firenena ? Laharam-pahamehana ny fanabeazana, tsy hatahotra na hisalasala fa hatoky ny herin’i Kristy. Ao an-tanàna mihitsy no iainana ny finoantsika an’i Kristy, fa tsy any am-piangonana fotsiny. Tamin’ny fihaonanay taminy iny ihany koa no nampitany ny tso-dranon’Andriamanitra ho antsika mianakavy.